फुटको असर: गजुरीको वडामा पनि जोगिएन एमालेको विराशत - Pabil News
फुटको असर: गजुरीको वडामा पनि जोगिएन एमालेको विराशत
जेठ ४ गते, २०७९ - ०८:०६
नेकपा एमाले नफुट्दा लालकिल्ला मानेको गजुरी गाउँपालिका अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले कब्जामा पारेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादी र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । ८ ओटा वडा मध्य कांग्रेसले ३ ओटा र माओवादीले ५ ओटा वडा जितेको छ । पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनसँग एक्लै लडेर गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित ४ ओटा वडा जितेको एमाले यो निर्वाचनमा पत्तासाफ नै बनेको छ ।
गठबन्धन गर्दा गजुरी समाजवादीको भागमा परेन । वडा तहमा गठबन्धन भएन । एक्लै चुनाव लड्दा जित्ने संभावना पनि भएन । त्यसपछि समाजवादी एमाले हराउ अभियानमा लाग्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं. नेकपा एकिकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको इलाका गजुरीमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीले फाइदा लुटेको हो ।
समाजवादीको बलियो मानिएको वडा नं. २ मा माओवादीले कांग्रेसलाई सहयोग गरेपछि समाजवादीका उम्मेदवार पराजित भएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्षमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका गणेशलाल श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । उपाध्यक्षमा गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसकी सर्मिला विसुराल विजयी बनेकी छिन् ।
गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार बनेका श्रेष्ठले निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष समेत रहेका नेकपा एमालेका राजेन्द्र विक्रम बस्नेतलाइ २२ सय ५७ मतअन्तरले पराजित गर्दै विजयी भएका हुन् । उपाध्यक्षमा पनि गठबन्धनकतर्फकै नेपाली काँग्रेसका उम्मेद्वार शर्मिला विशुरालले नेकपा एमालेकी भगवती खतिवडालाइ २१ सय ७ मतअन्तरले पराजित गर्दै विजयी भएका हुन् ।
गणेशलालको ६ हजार ३ सय ८ मत आउँदा एमालेका बस्नेतको ४ हजार ५१ मत आएको थियो । उपाध्यक्षमा विशुरालले ५ हजार ६ सय ९९ मत पाएकी थिइन् भने खतिवडाले ३ हजार ५ सय ९२ मत मात्रै पाएकी थिइन् ।
२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्ला एक्लै लडेका दलहरु यसपाली नेकपा एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरे प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । २०७४ मा नेकपा एमालेको तर्फबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा राजेन्द्र विक्रम बस्नेत र उपाध्यक्षमा सीता ढुंगाना विजयी भएका थिए । एमालेको विभाजनमा उपाध्यक्ष ढुंगानाले नेकपा एस रोजेपछि गजुरीमा एमाले कमजोर बनेको हो ।
पहिलो निर्वाचनका पनि प्रतिपर्धी
निर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठ र निवर्तमान अध्यक्ष बस्नेत ०७४ सालमा पनि प्रतिस्पर्धी थिए । २०७४ को निर्वाचनमा बस्नेतले ४ हजार ३ सय ३६ मत ल्याउदा श्रेष्ठले ४ हजार ६ मत ल्याएका थिए । त्यो बेलाको हारको बदलामा यो पटक गठबन्धनको सहयोग लिएर श्रेष्ठले चुक्ता गरेका छन् ।
उपाध्यक्षमा विजयी विसुरालले ५ हजार ६ सय ९९ मत ल्याएकी छन् भने उनको प्रतिद्वन्दी एमाले उम्मेदवारले ३ हजार ५ सय ९२ मत ल्याएकी छन् । विसुराल पनि ०७४ मा उपाध्यक्षमा एमालेसँग परिजित बनेकी थिईन् । यो पटक गठबन्धनको सहयोगमा उनले पनि एमालेलाई बदला चुक्ता गरिन् ।
माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष सहित ५ वटा वडा र कांग्रेसले उपाध्यक्ष सहित ३ वटा वडामा जित हासिल गर्दा गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादी र एक्लै प्रतिपर्धामा रहेको एमालेले वडा समेत जित्न सकेनन् ।
पहिलो निर्वाचनमा एमालेले वडा नं. १, २, ५ र ७ मा गठबन्धनसँग एक्लै जितेको थियो । एमाले फुटेपछि वडा नं. २ का तत्कालिन वडा अध्यक्ष चुडामणि कँडेल र वडा नं. ७ का तत्कालिन वडा अध्यक्ष केशव अधिकारीले नेकपा एकिकृत समाजवादी रोजेपछि गजुरीमा एउमाले झनै कमजोर बनेको छ ।
गजुरीमा विजयी भएका वडा अध्यक्षहरु
गजुरी १, तारा भण्डारी (नेकपा माओवादी केन्द्र)
गजुरी २, द्रोण कडेल (नेपाली काँग्रेस)
गजुरी ३, ऋषिलाल श्रेष्ठ (नेपाली काँग्रेस)
गजुरी ४, सुरेन्द्र चेपाङ (नेपाली काँग्रेस)
गजुरी ५, गोबिन्द लामिछाने (नेकपा माओवादी केन्द्र)
गजुरी ६, भक्त ब तामाङ, (नेकपा माओवादी केन्द्र)
गजुरी ७, बद्री जम्कट्टेल, (नेकपा माओवादी केन्द्र)
गजुरी ८, देवराज ओझा, (नेकपा माओवादी केन्द्र)